I-Logos yeqela lezopolitiko - I-Idlo yaseRiphabliki ne-Democrat
Imbali yezobupolitiko zeqela lezopolitiko eMelika
AmaRiphabhlikhi sele sele edibene neendlovu, kwaye iiDemokhrasi ziye zamkela iesile iminyaka emininzi kwizopolitiko zaseMerika.
Ibali elifanayo: Kutheni amaRiphabhlikhi aBomvu kwaye iiDemokhrasi ziBlue
Kodwa ezo zithombe zavela phi?
Kwaye kutheni iimpawu zeendlovu kunye neesile zimile ukuvavanya kwexesha?
Malunga neDemocratic Donkey
Ukusetyenziswa kwezidemokhrasi kweesile kuqulethwe kwiphankaso yomongameli we-1828 , edlalwa njengelinye lamaphulo ezopolitiko angcolileyo kwimbali yase-US .
Iindaba ezifanayo: Ngaba iziThuthi eziNgcakile zisebenza?
UMongameli uYohn Quincy Adams wayejongelwa nguDemocratic Andrew Jackson, owayenembali enemibala abachasi bakhe bafuna ukuyifumana. Njengengcali yembali ye-19th Century uRobert McNamara uye wabhala:
"Kwalabo babemthiyile uAndrew Jackson, kwakukho igolide yezinto eziphathekayo, njengoko uJackson wayedume ngokuba ngumsindo wakhe kwaye wayekhokele ubomi obunobundlobongela kunye nokuphikisana. 1806. Xa wayala umkhosi ngo-1815, wayeyalele ukubulawa kwamalungu omkhosi atyholwa ukutshitshiswa. Umtshato kaJackson waba ngumfowuni wokuhlaselwa kwephulo. "
Abaphikisi bezopolitiko bakaJackson bathetha ngokubhekiselele kuye ngokuthi "ingqungquthela," igama elihlekisayo umgqatswa ekugqibeleni wamkela.
Ichaza iWasssonian :
"Ngokuqinisekisiwe ngabagxeki bakhe, uJackson wamkela umfanekiso njengophawu lomkhankaso wakhe, ekhumbuza idonki ngokugxininisa, ngokuzimisela, nangomnqweno, endaweni yokungahambi kakuhle, ephosakeleyo, eqinile."
Ibali elidibeneyo: Phrinta iphepha lemibala Ebonisa iDonkey neNdlovu
Umfanekiso kaJackson njengembongolo.
NgoJanuwari ngo-1870, umculi wezobupolitika weHarper's Weekly kunye neRepublican othembekileyo uTomas Nast waqalisa ukusebenzisa i-esile ukumela iiDemokhrasi rhoqo kwaye imifanekiso ibanjwe.
I-cartoon yayibizwa ngokuba yi- A Live Jackass Kicking a Lion Lion .
Malunga neRephablikhi yeNdlovu
I-Nast ijongene nendlovu yeRiphabhlikhi, ngokunjalo. Uqala ukusebenzisa indlovu ukumela amaRephabhuliki kwi-cartoon yeHarper's Weekly ngoNovemba ka-1874. Uya kuqhubeka ukuyisebenzisa kangangezinye iixesha, nangona ehlala engaqiniseki ukuba kutheni, ngokukhethekileyo, uNast wakhetha indlovu ukumela iPublic Republic Party.
Wabhala iThe New York Times :
Ngomnyaka wee-1880 ukhetho lonyulo lukazwelonke, abakhandi beemifanekiso bezinye iimpapasho babebandakanya isimboli sendlovu emsebenzini wabo, kwaye ngo-Matshi 1884 uNast wayengabhekisela emfanekisweni awawumenzile kwiRiphabhuliki yePublic "njengeNdlovu eNgcwele."
Indlela yokudibanisa "Ukuphulaphula" (ukuphulaphula) ngesiFrentshi
Ngaba Ukukholisa Umdlalo Omhle Kuthetha Ukuba Unokuba Ngumprofeti?
Ukwahlukana phakathi kwama-Irons akha kunye ne-Cast Irons
I-Skydiving yangaphakathi e-USA
Inxaxheba yesiFrentshi epheleleyo • Passé compé du participe
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yasePlattsburgh
Inyanga yeMbali yeMnyama eprintiweyo